Malunga nathi-Tianjin TheOne Metal Products Co, Ltd.
Uhlobo lweJamani lweTemplate yeThoba
Uhlobo lweGerman Hamp Clamp ngesibambo
Uhlobo lweMox yaseMelika yoGqibeleleyo
Uhlobo lweMox yaseMelika yoHambo ngeHandle
Uhlobo lweEuropean Hamp Clamp
Umsebenzi oMkhulu woQhushumelo lweHlobo lweMelika
Uhlobo lweBritish Uhlobo lweHypamp
Uluhlu lweeNdawo zaseBritani zoMdabu lweeHlobo zeKhampasi
Isitampu samanzi esimileyo
Ikhampasi yeBhendi eBhendi enye
Isitampu sePipe yeHollow
IBhola ephindwe kabini yeBolt kabini
T Uhlobo lweClamp yePipe
T Uhlobo lweClamp yePipe eneNtwasahlobo
I-B band Pipe Clamp
U-Bolt Umbhobho weClamp
Isitampu sePay yeHanger
Isitampu sePipe yesitayile
Ikhampasi yombhobho ngeRubber
Ezinye izixhobo zeHardware
Ikhampasi yeHaw Wire Double
Ikhampasi yeHiphu yeMini
Isitampu seHosa seNdlebe
Isitampu seHapu sentwasahlobo
I-Tianjin TheOne Metal Products Co, Ltd. ibekwe kwiZiya kwiZolimo eziVuselelweyo zezoqoqosho, eyakhiwe kuqala i-Oct ka-2008, kwaye yaqala ukuvula imarike yekhaya evela kubathengisi nakwiinkampani zorhwebo.
Ukusukela ngonyaka ka-2010, siphuhlise iimarike zaphesheya, ngaxeshanye saseka iqela lokuthengisa kurhwebo lwangaphandle.
Ngo-2013, sathatha inxaxheba kwiCanton Fair okokuqala, kwaye saqhubeka nokwandisa iqela lethu.
Ngo-2015, ndaqala ukuthatha inxaxheba kwimiboniso yezangaphandle.
Ngo-2017, yaphendula kumgaqo-nkqubo kazwelonke wokukhusela indalo.
Sifudukele kwiPaki yeNdawo yoSetyenziso lwezoqoqosho eVuselelweyo kwiZwelonke-- kwiZiya yePaki yeZiya. Kwangelo xesha linye sasiphucula kwaye sihlaziya umzi-mveliso mdala ukuze sivelise kunye.
Imveliso, siye sahlaziya izixhobo, zatshintshwa kwinkqubo yokuphela kwesitampu sokwenza izixhobo ezidibeneyo zenkqubo yokuphucula izixhobo, siphucula kakhulu ukusebenza kwemveliso.
Ukulawulwa komgangatho, inkampani ihlala ngenkqubo yokuhlola ngokungqongqo, iya kuhlolwa kubume bendalo kunye nokwakhiwa kweekhemikhali kwakamsinya nje ukuba izinto ezenziwe ngendalo zingene kumzi-mveliso. kwinkqubo yemveliso, umhloli uya kwenza uhlolo olungaqhelekanga kunye nokuhlolwa kwendawo; Izinto ezigqityiweyo ziya kuvavanywa, zifotwe ze zifayilishwe kunye nengxelo yokuhlolwa yiQC phambi kokuba kuziswe. Ukuqinisekisa umgangatho wemveliso, qinisekisa amalungelo kunye nemidla yabathengi.
Ngo-2019, ukwenza imarike ibe yengeniso ngokuthe kratya, umzi-mveliso womeleza ulawulo, ekuqaleni ubhaliso lwentengiso kunye nenkqubo yokusebenza, ugcwalise irejista yophawu lwentengiso ngaphakathi nangaphesheya, uzuze isiqinisekiso se-ISO9001 soMgangatho weNkqubo kunye nesiqinisekiso seEC.
Ukulawulwa kwabasebenzi, sithatha "usapho" njengesiseko, singakhathaleli kuphela umntu ngamnye njengomthengi, kodwa sikwabandakanya "usapho" kubaqeshwa-ukusasaza intlalontle ngeholide, uqeqesho lwezakhono ezahlukeneyo, ukulungiselela abasebenzi abahambayo, ezemidlalo, ukuze abasebenzi banokuba kwimeko yokuvuya basebenze, babonakalise imvo yomqeshwa ngamnye, ngokwenene bathathe umzi-mveliso njengentsapho.
Kubathengi, sisoloko sibambelela kumgaqo "womgangatho osisiseko, sibonisa ukubaluleka, inkonzo egqwesileyo, umthengi wokuqala". Kwiminyaka eli-12 yokuphuhliswa, siye sanamathela kwifilosofi yeshishini "yokuvelisa iimveliso ezintsha ukuqhubela phambili, ukudibanisa iimveliso ezindala zokuzinzisa". Ukuzinza imarike esele ikho, ngelixa kwangaxeshanye siqhubeka sisomelela kwaye somelela.
Ngokokhuphiswano oluthe kratya kwezoqoqosho nakwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe, sijamelene noxinzelelo kunye nemiceli mngeni kuzo zonke iinkalo, kodwa sihlala sigxile kwinkcubeko "yasekhaya" kunye nokuphucula indlela yokwenza kunye nomgangatho wemveliso ngokuqhubekekayo. Sikholelwa ukuba sizakungena. Isandla kunye nabathengi bethu bakudala kwixa elizayo, dibana nabahlobo abatsha kwaye ufumane inkxaso yakho.
I-Tianjin TheOne Metal Products Co, Ltd. Onke amalungu, wamkelekile "ekhaya".